Kuguma kweOpenOffice kwaswedera | Linux Vakapindwa muropa
Iyi inogona kunge iri imwe yenguva dzekupedzisira dzatinoona OpenOffice ichishanda, nekuti vamwe vanhu vari kutarisira chirongwa ichi vanoda kuivhara zvachose nekuti havana vashandisi uye nekuti izvo zvinokuvadza hazvigone kugadziriswa.
Nhasi zvakaziviswa kuti kambani yeApache inogona kupedza OpenOffice, hofisi suite iyo muzuva rake aive akakurumbira kwazvo, asi izvozvi mazuva ano zvinoita sekunge vashoma vanhu vanoishandisa.
Icho chikonzero chekugona kupera kweOpenOffice sezviri pachena ndechekuti kusagadzikana kwekuchengeteka muchirongwa ichi hakuna kugadziriswa. Vamwe vanhu vari muchirongwa cheApache, vakadai saDennis Hamilton, vanofunga kuti zvirinani kumira kutsigira hofisi yavo suite votarisa kune mamwe mapurojekiti.
Zvisinei, vamwe vanhu vari muchirongwa cheOpenOffice havabvumirani neizvi uye unoda kutanga patsva zita reOpenOffice, nemushandirapamwe mutsva wekushambadzira uye nekuhaya vashanduri vatsva vanoona nezve kugadzirisa kusagadzikana uku uye kugadzira chigadzirwa kukwikwidza
Kana chirongwa chikavharwa zvine mutsindo, zvimwe zvinhu zvinoramba zvisina kugadziriswa, senge chiratidzo cheOpenOffice, iyo yepamutemo wiki uye kodhi yayo. Pasina kupokana OpenOffice yaizosiya nhaka yakakura, nhaka inoita kunge chikamu chekare.
Mune maonero angu, ndinofunga chikonzero chaicho chavanoda kuvhara OpenOffice zvachose ndechekuti mamwe mahofisi emahofisi akaita seLibreOffice akanyatsodya chirongwa cheApache, kuwana vazhinji vashandisi uye kutsigirwa zvirinani nekuita.
Nekudaro, kuchine vanhu vanoshandisa ino hofisi suite, kunyanya avo vakariisa kana raizivikanwa uye vafunga kuenderera naro. Vanhu ava vaizosara vasina rutsigiro uye vaizofanira kuchinjira kuLibreOffice kana kuisa Microsoft Office kuburikidza neWine.
Ko OpenOffice ichafira zvakanaka here? ichi chinhu chinongotaurwa nenguva cheteSechisarudzo chepamutemo pane izvi chisati chaitwa, zvisinei, zvinhu zviri kutarisa zvakashata kune iyo Apache suite.
Kana iwe uchida kurangarira nguva dzekare kana kupa ino hofisi suite imwe yekupedzisira mukana, iwe unogona kurodha pasi iyo yazvino vhezheni pano. Kana pachinzvimbo unoda kuchinja zvachose kuLibreOffice, unogona kubaya Iyi link izvo zvinokutora iwe uende kune yepamutemo peji rezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kuguma kweOpenOffice kwaswedera
Ichokwadi ndechekuti, usashushikana kana kunetseka, vagadziri veOpenOffice.org vekare ndivo vanochengetedza LibreOffice, ndiko kuti, basa reOpenOffice.org rakadzoserwa kuLibreOffice uye izvi kuti zvirambe zvisina mubatanidzwa, risiti kubva kuThe Document Foundation.
Apache yakaedza kumutsiridza Apache OpenOffice, asi haina kana vagadziri kuburitsa zvigamba zvekuchengetedza.
Kana OpenOffice ikapera zvingave zvinonyadzisa kuti zvinonzwika sei ... nekuti OpenOffice ine mukurumbira mukuziva pamwe, zvisinei nhasi iro zita iri izita chete, nekuti zvese zvaimbove kumashure kwezita iro nhasi zvinowanikwa muLibreOffice.
Pindura kuna chilenohdu
James bond akadaro
Iwe unogona kugara uchitsvaga iyo yekutanga Staroffice uye kuishandisa shamwari !!!
Pindura kuna James bond
Florida Man Akasungwa Ne "Kufungidzira" Kernel.org Server